Windows ကိုအတွက်ကြိုးမဲ့ Adapter ကို Install လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြဘူးမည်သို့ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇွန်လ 17, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို, အီလက်ထရောနစ်, networks, OS ကို-STORE, OSGEAR ပံ့ပိုးမှု, ထုတ်ကုန်များ, နည်းပညာ 0
ငါသည်သင်တို့ကိုအလုပ်ရပ်တန့်ဖို့ကွန်ယက် adapter ယာဉ်မောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမေးခွန်းအချို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ထင်. ဤအခြေလှမ်းများပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကြိုးမဲ့ adapter devices များသို့မဟုတ်ခေတ်မမီတော့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ် Follow. သငျသညျမှန်ကန်စွာကြိုးမဲ့ Adapter ကို install လုပ်ထားပြီသေချာအောင်လုပ်ပါ.
option 1 - အလိုအလျောက် (အကြံပြုထား) ပြတင်းပေါက်များ 7, Vista နှင့် XP ကို ​​Windows Update ကို အသုံးပြု. နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ယာဉ်မောင်းသည်လက်ရှိတွင် installed ဖို့ဒါမှမဟုတ်အသစ်အ Adapter ကပေးနိုင်ပါသည်. အဖြစ်မကြာမီ device အတွက်ပလပ်သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကတပ်ဆင်ထားသည်အဖြစ်, Windows ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်နှင့်အလိုအလျောက် drivers တွေကို download လုပ်ပါကြိုးစားပါလိမ့်မယ်.
Option ကို 2- ကိုယ်တိုင် - သင့်ကိုတပ်ဆင်ရန်အချို့သောကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သည်းခံခြင်းလိုပါလိမ့်မယ် Wi-Fi Adapter ကိုမောင်းသူ သငျသညျအွန်လိုင်းအတိအကျညာဘက်ဒရိုင်ဘာရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့ဤနည်း, Download ပြုလုပ်ကြောင့်ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းကို install.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရန်သင့် adapter ထည့်ပြီးနောက်, သငျသညျကို install လုပ်ဖို့လိုခငျြသော adapter များအတွက်မှန်ကန်သောကားမောင်းသူကို download လုပ်ပါ.
pop-up ပေါ်လာသောပြီးနောက်ယာဉ်မောင်း Installing
လှမ်း 1: ကွန်ယက်အဒက်တာကိုပလပ်ပြီးတာနဲ့, တစ်ဦးတွေ့သည်နယူးဟာ့ဒ်ဝဲပြတင်းပေါက် pop-up ပါလိမ့်မယ်. Locate နှင့် install မောင်းသူဆော့ဖျဝဲပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ (အကြံပြု)
လှမ်း 2: သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်နေ့ညွှန်ကြားချက်သင့်ရဲ့တို့နှင့်အတူကြွသော disc ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို adapter. ငါ disc ကိုမရှိဘူးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ. အခြားရွေးချယ်မှုငါ့ကိုပြရန်.
လှမ်း 3: ကားမောင်းသူ software ကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာ Browse ကိုကလစ်နှိပ်ပါ (အဆင့်မြင့်).
လှမ်း 4: အဆိုပါ Browse ကိုကလစ်နှိပ်ပါ… ကြယ်သီး. သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းများ၏ဖိုင်တွဲ Locate. ဒီဥပမာမှာ, VISTAX86 ဟာ Linksys WUSB54G အဘို့ရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်.
လှမ်း 5: Next ကိုနှိပ်ပါ. ယာဉ်မောင်း software ကို install လုပ်ဖို့ကွန်ပျူတာများအတွက်စောင့်ဆိုင်း.
Windows ကိုများအတွက် Device Manager ကတဆင့်မောင်းသူတပ်ဆင်ခြင်း >>>
လှမ်း 1: Start Menu ထဲမှာ, စီမံခန့်ခွဲရန်ရွေးဖို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် right-click.
လှမ်း 2: ဘယ်ဘက်မှာ, လက်ျာပျေါဆောင်ခဲ့ခြင်း Device Manager ကို select.
မှတ်စု: အဆိုပါယာဉ်မောင်း software ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရသေးပြီဆိုရင်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း install လုပ် သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ ယင်းအခြား devices များအုပ်စုတွင်တက်ရောက်ရလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်ယခင်ပုံတွင်ပြသကဲ့သို့.
လှမ်း 3: ညာဘက်ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲမွမ်းမံမသိသော adapter ကို click.
လှမ်း 4: updated driver ကို software ကိုအလိုအလျောက်ရှာရန်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ.
မှတ်စု: Windows ကိုမှမလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင် သင့်ရဲ့ Adapter ကို install, Windows ကို အလိုအလျှောက် install ဟုသတ်မှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ.
လှမ်း 5: သင့်လျော်သော setting များကိုအောက်ပါလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုရောက်ရှိလာသောကရွေးချယ်နေကြတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ:
Windows ကို7/ Vista က: Start ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ > ညာဘက် Computer ကိုကလစ်နှိပ်ပါ > properties ကို > Advanced system settings > hardware tab ကို > စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းကိုဆက်တင်
Windows XP ကို: Start ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ > ညာဘက် My Computer ကိုကလစ်နှိပ်ပါ > properties ကို > hardware tab ကို > Windows Update ကို
လှမ်း 6: အပြောင်းအလဲကိုလျှောက်ထားရန်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် Settings များသို့မဟုတ် OK ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အောင်မြင်သောယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်၏အတည်ပြုချက်သင့်ရဲ့ adapter ၏စံပြတံဆိပ်အခါအောင်မြင်နှင့် Device Manager ရဲ့ Network Adapter ကအုပ်စုစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်.
Tech မှ-ပြန်ကြားရေးအကြောင်းပိုမို, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
install သို့မဟုတ် Windows ပေါ်မှာရှာတွေ့မ Optical Drive ကိုဖြေရှင်းဖို့ကိုဘယ်လို
OS ကို-STORE ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Software များ device ကိုမော်ဒယ် 64-နည်းနည်းက Windows စီပီယူ Intel က Technology_Internet ပရိုဆက်ဆာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Samsung က နည်းပညာ HD Graphics မိုဘိုင်းဖုန်း ဥပဒေရေးရာအနက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HTC က processor ​​ကို
Qualcomm မှ Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် နည်းပညာ device ကိုမော်ဒယ် Sony Ericsson က စီပီယူ Nokia က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ 64-နည်းနည်းက Windows ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Intel က processor ​​ကို Software များ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု OS ကို-STORE မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Server ကို Samsung က HTC က Samsung ရဲ့ Galaxy ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စမတ်ဖုန်းများ ပရိုဆက်ဆာ HD Graphics